I nkwenkwezi yoBukumkani bukaDavide kubuYuda
Unqulo & Umoya Ezisiseko
Ukubaluleka kweNkwenkwezi eZiNtandathu
I nkwenkwezi kaDavide yinkwenkwezi esithandathu eneenkcukacha ezenziwe ngamathathu e-triadrilateral angaphezu komnye. Kukwaziwa nangokuthi i-hexagram. NgesiHebhere, kuthiwa nguMagen David (מָגֵן דָּוִד), oku kuthetha "ingxowa kaDavide."
I nkwenkwezi kaDavide ayinayo nayiphi na inkolo ebalulekileyo ebuYuda, kodwa enye yeempawu eziqhelekileyo ezidibene nabantu bamaYuda.
Imvelaphi yeNkanyezi kaDavide
Imvelaphi yeNkwenkwe kaDavide ayibonakali.
Siyazi ukuba isimboli asizange ihlangane kunye nobuYuda, kodwa isetyenziswe ngamaKristu namaSulumane kwiindawo ezahlukeneyo kwimbali. Ngamanye amaxesha kwakunxulumene noKumkani uSolomon esikhundleni sikaKumkani uDavide.
I Nkwenkwezi kaDavide ayichazwwanga kwincwadi yoncwadi yabaRabhi kude kube yiMinyaka Ephakathi. Kwakuye kwithuba lokugqibela kweli xesha ama-Kabbalists, amaYuda amanga, aqala ukudibanisa isimboli enentsingiselo yokomoya. Enye i- siddur (incwadi yomthandazo yamaYuda) evela ngomhla we-1512 ePrague ibonisa iNkwenkwezi enkulu kaDavide kwiphepha kunye nenqaku:
"Uya kulungela ukunika isipho esinomdla kunoma ubani omba iSield kaDavide."
Inkwenkwezi kaDavide ekugqibeleni yaqinisekiswa njengesimboli samaYuda xa yaba yinto ekhethiweyo yokwakha izakhiwo zamaYuda kuwo onke ama-Middle Ages. Ngokomfilosofi waseJamani ongumfilosofi kunye nomlando-mlando uGershom Sholem, amaYuda amaninzi amkela lo mfuziselo eMpuma Yurophu ngenzame yokufanisa ukusabalalisa komnqamlezo ongumKristu.
Emva koko, ngexesha leMfazwe Yehlabathi II, xa uHitler ephoqa amaYuda ukuba agqoke inkwenkwezi ephuzi kaDavide njengengqayi yehlazo, isimboli senziwa ngokuphawulekayo njengesimboli samaYuda. AmaYuda ayekanyanzeliswa ukuba agqoke amabheji athile ngexesha leMinyaka Ephakathi, nangona engekho Inkwenkwezi kaDavide.
AmaYuda athabatha uphawu, eqala ngeZiyonist kwi-First Zionist Congress ngowe-1897, apho iNkwenkwe kaDavida yonyulwa njengesimboli esiphambili yeflegi yelizwe elizayo lika-Israyeli.
Namhlanje, ifulegi yakwaSirayeli ibonisa inkwenkwezi ebomvu kaDavide ngokugqithiseleyo phakathi kwebhanki emhlophe kunye nemigca emibini eluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kunye nezantsi kweflegi.
Ngokufanayo, amaYuda amanxiba agqoke iingubo ezibonakala ngokugqithiseleyo inkwenkwezi kaDavide namhlanje.
Yintoni uDavid Connection?
Ukubambisana kunye noKumkani uDavide kuvela kwingcamango yamaYuda. Ngokomzekelo, kukho i- midrash ethi xa uDavide esemncinane wayilwa notshaba, uKumkani uNimrod. Ikhuselo likaDavide lalinamabhontshi amabini anqamlezayo emkhosini we-shield ejikelezileyo, kwaye, ngenye indlela, imfazwe yaba namandla kangangokuba ama-triangles amabini ahlanganiswa ndawonye. UDavide wayinqola imfazwe kwaye izixantathu zombini zaziwa ngokuba nguMagen uDavide , iSield sikaDavid. Leli bali, ewe, linye nje lemininzi!
Kukho iingcamango ezininzi malunga nenkolelo yeNkwenkwezi kaDavide. Abanye abakwaKabbalists bacinga ukuba iingongoma ezithandathu zimelela ulawulo olupheleleyo lukaThixo phezu kwendalo yonke ezintlanganisweni ezintandathu: ngasentla, ngasentla, empuma, kwintshona, phezulu nangaphezulu. Ama-Kabbalists ayekholelwa ukuba ii-triangles ezimbini zimelela ubunzulu bomntu obunobuntu - obuhle kunye nobubi - nokuba inkwenkwezi ingasetyenziselwa ukukhusela kwimimoya emibi.
Isakhiwo seenkwenkwezi, kunye nezilwanyana ezimbini eziguqayo, kuye kwacingelwa ukuba zimele ubuhlobo phakathi koThixo nabantu bamaYuda. I nkwenkwezi ekhombayo ibonakalisa uThixo, kwaye inkwenkwezi ebonisa ukuba imele amaYuda emhlabeni. Kodwa abanye baye baqaphela ukuba kukho amacala angama-12 kwintantathu, mhlawumbi emele iZizwe ezilishumi elinesibini .
Ukuhlaziywa nguChaviva Gordon-Bennett.
Amafutha omlingo 101
Indlela yokwenza i-Quartz Crystal Wand
Ithini elithi "Teshuvah" lithetha ntoni kubuYuda?
Iyintoni iSilwanyana esiTyhila?
Yintoni i-Chai Symbol ibonisa amaYuda?
Yintoni Engaphambi KwamaKristu?
Inkcazo yeCeltic kwiiNkolo zamaPagane
Yintoni i-Psychic Medium?
Ngaba UbuYuda Bukholelwa Ekufeni?
Ngaba Uyazi Lezi Quotes zikaPeter Pan?
Yintoni i-Dolphin-Safe Tuna?
Indlela Yokufunda Iimviwo zeBiology
Iyintoni i-China yeVessel?
Imibuzo yokuvutha: Isikhokelo kuWilliam Blake "iTyger"
Indlela yokuphatha i-Flat Brush nge-Colors Two
Biography yeGenghis Khan
USydney Pollack noRobert Redford Classic Movies
Ukuguqula i-Chakras yakho
Ulwazi ngoKumkani uPrrrhus we-Epirus
Ingozi yeNyukliya yeNyukliya
Ngaba Ikhofi Inokunceda Ukhuphe?
I-Media Media idibana nezoLuntu kwiCandelo le-21 leminyaka
Iincwadi zakho ezipheleleyo zeencwadi zikaJames Patterson
I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa kwiikholeji ze-Idaho
Ukuqhathaniswa kwemali yomyinge we-18 profesiones kwi-8 imixholo
URichard Nixon - uMongameli we-70 we-United States
Isingeniso kwisiCwangciso seNtetho yeSpeyin
Iindaba ezimnandi zeWebhu zeWebhu kwiJazz ngeBlog yakho okanye kwiWebhu